Vitamina sy otrikaina ho an'ny soavaly, iza avy ireo tena ilaina? | Soavaly Noti
Jenny monge | | soavaly, Fahasalamana sy fikarakarana
Amin'ny tontolon'ny biby, ny karazana tsirairay dia mila fandraisana anjara voalanjalanja amin'ny otrikaina mba hampivelatra tsara, hahafahany manao hetsika isan'andro ary amin'ny farany dia salama salama. Tsy misy ankanavaka ny soavaly ary mila otrikaina sy otrikaina hafa izy ireo mba ho salama.
Rehefa miresaka momba ny zavatra mahavelona dia miresaka singa sasany tena ilaina toy ny proteinina, mineraly, rano, fibre, vitamina, sns. Ireo sakafo ireo matetika no mahatratra ny biby amin'ny alàlan'ny sakafo, noho izany ilaina ny sakafo voalanjalanja.
Andao hojerentsika hoe iza amin'izy ireo no tena ilaina amin'ny fitoviana.
1.2 Otrikaina B1
1.3 Otrikaina B2
1.5 Otrikaina D
1.6 Otrikaina E
3 Ahoana no hahalalana raha mila famatsiana vitamina ny soavalintsika?
Eny an-tsena dia afaka mahita famenon-tsakafo vitamina be dia be ho an'ny soavaly isika. Na izany aza, alohan'ny hanombohana ny fanomezana azy ireo ny biby, dia zava-dehibe ny mampahafantatra antsika ny singa misy azy ireo, momba ny inona izy ireo ary raha tena mila azy ny soavalintsika.
ny vitaminina no otrikaina amidy indrindra rehefa ampiarina amin'ny alàlan'ny famenon-tsakafo, izany dia satria izy ireo mifandraika amin'ny fihenan'ny aretina amin'ny soavaly. Saingy, ankoatry ny maha mpivarotra azy indrindra dia io no ampiasaina faran'izay ratsy.
Tena ilaina ny manamarika izany miaraka amin'ny sakafo voalanjalanja dia tsy tokony ilaina ny mifidy fanafody fanampiny afa-tsy amin'ny tranga sasany na amin'ny fotoana sasany anaovana asa na fanatanjahan-tena bebe kokoa. Raha mitaky fandraisana anjara fanampiny ny bibintsika, amin'ny ankapobeny, dia porofo izany amin'ny fomba sasany. Ary raha te-hanome fanampin-tsakafo miandrandra fitomboan'ny fampihetseham-batana na ny asan'ny soavalintsika dia tsara kokoa izany mifampidinika amin'ireo matihanina amin'ny fitsaboana ny biby alohan'ny handefasana ny tenantsika hitantana fanampin-tsakafo, satria ny vitamina tafahoatra na ny otrikaina sasany dia mety hanimba.
Ny vitamina dia fitambarana voajanahary izay hitantsika mizara ho vondrona roa arakaraka ny mahavelona azy: ny soluble na soluble (otrikaina A, D, E ary K) ary ny soluble na rano-soluble (Vitamin C, vondrona B ary ny sisa). Ny voalohany dia manana fanesorana miadana kokoa ary azo tazomin'ny tavy amin'ny vatana, fa ny farany kosa dia voafafa haingana amin'ny alàlan'ny fisotrony, izay mahatonga azy ireo tsy dia misy poizina.
Ok izao Inona ny vitamina ilaina mba hitazomana ny fahasalaman'ny soavaly?
Fantatra amin'izany ny vitamina anjara asa lehibe amin'ny fahitana, fa koa, tena zava-dehibe amin'ny fanavahana sela, amin'ny fiterahana, ny embryogenesis, ny fahaterahana ary ny fivoaran'ny foal ary, toa tsy ampy daholo izany rehetra izany, miditra an-tsehatra amin'ny valin'ny hery fiarovana manohitra ny aretina.
Zava-dehibe ny mampifantoka ny sainy ny fihoaram-pefy ity vitamina ity dia manimba ny taolana, mahatonga azy ireo ho malemy koa miteraka teratogenesis sy exfoliation ny epithelia.
Araka ny hitantsika, ny zavatra rehetra dia tsara amin'ny refy sahaza azy, noho izany ny maha-zava-dehibe ny fahazoana antoka ny momba ny fotoana sy ny fotoana hanomezana ny bibintsika sy ny fifampidinihana amin'ireo matihanina.
Ny otrikaina A dia azo jerena amin'ny sakafo sasany toy ny pro-vitamina A (retinol, beta-carotene) izay natelina, dia lasa vitamina A. Sakafo io sakafo io indrindra rehefa maintso izy ireo.
Antsoina koa thiamine, dia izany tena ilaina amin'ny fihenan'ny hozatra ary noho izany dia mifandraika amin'ny metabolika gliosida. Fahampiana an'ity vitamina ity Mety misy tsy fitoviana amin'ny hozatra, hovitrovitra, tsy fahazotoan-komana ary inona no tafiditra amin'ny fihenan'ny lanja.
Aiza no ahitana an'io vitamina io? Amin'ny ankamaroan'ny serealy ary indrindra amin'ny masirasiran'ny labiera.
Antsoina koa hoe Riboflavin, dia ilay vitamina izay Izy io dia voarohirohy amin'ny metabolisma angovo sy ny mekanisma fiarovana antioxidant.
Marina fa amin'ny soavaly dia tsy nisy famantarana manokana nateraky ny tsy fahampian'izy ireo nankasitrahana, saingy nisy tranga ny conjunctivitis ho iray amin'ireo soritr'aretina.
Afaka mahita azy ireo ao isika fifantohana tsara amin'ny legum, ohatra tsara dia ny alfalfa, ary koa ny serealy sasany na dia kely aza ny fifantohana.
Vitamina C na asidra ascorbic dia zava-dehibe amin'ny asan'ny antioxidant Satria miaro ny taovam-pisefoana izy io, noho izany dia zava-dehibe ny fisorohana ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny fampihenana ny havizanana amin'ny fanatanjahan-tena.
Ny soavaly dia afaka mampihena an'io vitamina io amin'ny glucose.
Mahaliana ny manome fanampin-tsakafo an'ireo vitamina ireo rehefa 20 taona mahery ny soavalin-tsika, ary niatrika fizotran'ny taovam-pisefoana na fandidiana sasany.
Ity vitamina ity manampy ny fametahana ny ala, ny fifehezana ary ny famafana ny kalsioma sy phosforus, ho fanampin'ny fanentanana ny roa amin'ny taolana.
Fahampiana an'ity vitamina ity mety hitarika ho amin'ny tsy fahombiazan'ny taolana noho ny tsy fisian'ny kalsioma sy phosforus. raha ny fihoaram-pefy dia hiteraka fanaovana kajy malefaka.
Ity vitamina ity dia azo ampifangaroina amin'ny hoditry ny soavaly aorian'ny fiposahan'ny masoandro.
Raha omena amin'ny famenony izy, dia mety kokoa raha omena kalsioma sy posiporosy amin'ny tahan'ny 1.5 ka hatramin'ny 2 ampahany amin'ny kalsioma amin'ny 1 an'ny phosphore.
Malaza noho izany fiasan'ny antioxidant. Ity vitamina ity dia miaro ny lipida amin'ny fonon'ny sela sy ny hozatra, izay manakana azy ireo tsy hidina amin'ny okididia. Izy io koa dia miditra an-tsehatra amin'ny valin'ny hery fiarovana sy ny metabolisma angovo. Noho izany dia manampy amin'ny fihenan'ny henjana izy io ary tena atolotra ho an'ny soavaly fifaninanana.
Fahampiana vitamina E. mety hiteraka aretina isan-karazany toy ny aretin-kozatra fotsy amin'ny foal na aretin'ny hazondamosina.
Aiza no ahitantsika azy? amin'ny karazan-tsakafo marobe toy ny ahitra vaovao, ny fambolena maintso amin'ny fifantohana avo lenta ary ny fihenan'ny voamadinika. Ny zavamaniry dia manana fatran'ny vitamina E ambony kokoa noho izy tanora.
Ny vitamina E, miaraka amin'ny selenium, dia azo omena mba hisorohana ny fahasimban'ny sela amin'ny sela.
Tokony ho raisina fa ny seleniuma dia mety misy poizina, saingy noho izany dia mila manome ny bibintsika mandritra ny andro maromaro sy vola be isika. Noho izany dia sarotra ny misotro soavaly soavaly. Na dia amin'ny zava-drehetra aza, ary hamerina izany imbetsaka mandritra ny lahatsoratra isika, ny lakileny dia ny fandanjalanjana ny sakafon'ilay biby sy ireo fanampiana omena raha ilaina.
Ity vitamina ity Izy io dia ampiasaina amin'ny famokarana sela mena, ho an'ny fizotra, fantatra ihany koa ho toy ny vitamina anti-hemorrhagic.
Tena tsy fahita firy ny mahita lesoka an'io vitamina io ary noho izany dia tsy afaka miresaka momba ny vokany isika.
Ny fambolena dia manana fifantohana betsaka an'ity vitamina ity na dia mety ho hita koa aza amin'ny serealy.
Ny mineraly dia iray amin'ireo vondrona otrikaina ilaina izay ilaintsika mitovy. Ilaina amin'ny fitomboan'ny taolana sy ny fivelaran'ny taolana izy ireo, ankoatr'izay, tompon'andraikitra amin'ny fivezivezena mety izy ireo.
Ny mineraly ilaina amin'ny sakafon'ny soavalintsika dia:
Calcio, mba hanana rafitry ny taolana sy nify mahery ary ho an'ny fiasa marina amin'ny rà sy ny hozatra.
Sodium klôroida, ilaina amin'ny tsiranoka amin'ny vatana sy ra.
Cobalt, ho an'ny synthesis ny vitamina b12.
Copper, fototra miaraka amin'ny vy.
phosphore, ho an'ny fandanjana marina ny kalsioma sy ny fanamboarana ny sela.
Hierro, ho an'ny fananganana hemoglobin. Tandremo sao manjary manapoizina ny fampiasana fanampin-tsakafo tsy mety.
iode, manampy ny fiasan'ny tiroida mety.
Magnesio, ho an'ny tonon'ny hozatra sy ny fivelaran'ny taolana mahitsy.
Manganese, manan-danja amin'ny fiasan'ny fiterahana sy ny firafitry ny taolana.
potasioma, manan-danja amin'ny sela mena sy sela hozatra ary koa ny metabolisma gliosida.
Ahoana no hahalalana raha mila famatsiana vitamina ny soavalintsika?
Ny voalohany dia ny mijery ny sakafon'ntsika biby, mamakafaka izay nohaniny sy izay otrikaina omeny. Mba hahatratrarana izany, dia hojerentsika ny fampahalalana momba ny sakafo nomen'ny mpanamboatra sakafo, amin'ny fiheverana ireo fiovan'ny lahy sy ny vavy, ny habeny, ny taonany, sns. ny equine tsirairay.
Raha voalanjalanja ny sakafo omena ny Equine, dia azo inoana fa tsy mila fandraisana anjara fanampiny izany afa-tsy amin'ny fotoana tena lehibe avy amin'ny asa mafy, fanatanjahan-tena na olana ara-pahasalamana.
Tsy misy lamina mety amin'ny soavaly, satria ny biby tsirairay dia tokana ary manana toe-javatra sy filana tsy manam-paharoa. Noho io antony io dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fakan-kevitra amin'ny mpitsabo veterinera matihanina.
Raha afaka manome sosokevitra vitsivitsy izahay torolàlana ankapobeny:
Para soavaly fanatanjahan-tena, Ohatra, izy tsy maintsy feno tanteraka ny fihinanana vitamina.
En soavaly izay mazàna ao anaty tranon'omby, ny otrikaina azony avy amin'ny ahitra sy alfalfa dia miha mahantra. Amin'ireny tranga ireny, misy vitamina fanampiny azo amporisihina mafy.
Ho an'ny foza ilaina ny fananan'izy ireo sakafo manome azy ireo vitamina A, C ary D ankoatry ny calcium sy phosforus. Amin'ny lafiny iray, soavaly olon-dehibe, ankoatry ny vitamina telo teo aloha dia tena ilaina ny zinc.
ny soavaly afaka milomano malalaka dia tsy mila famenon-tsakafo fanampiny afa-tsy amin'ny vanim-potoana fifaninanana na asa manokana.
Ny lesoka mahazatra dia matetika manome famenony hamahana olana manokana toy ny biotin ho an'ny fiarovan-doha. Mifandray anefa ny otrikaina rehetra rehefa miara-miasa izy ireo. Izany no antony anamafisanay ny maha-zava-dehibe ny sakafo marina sy voalanjalanja. Ary, raha ilaina ny famenon-tsakafo fanampiny dia alao aloha ny safidy izay manome fangaro vitamina sy mineraly.
Ary ambonin'izany rehetra izany, Aza diso amin'ny fanomezana soavaly fanampiny ny soavalinay satria hitantsika fa mety hanimba.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Vitamina sy otrikaina ho an'ny soavaly
Mitady vitamina ho an'ny soavaly aho, mahia be izy ireo ary malemy, manana soavaly manana zanak'omby sy bevohoka aho.